नगरपालिकका १० वटै वडामा सचिव छैनन्
१९ पुष, बैतडी । बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिकाका १० वटै वडा सचिवविहीन रहेका छन् । नगरपालिका स्थापना भएदेखि नै वडाहरुमा सचिवको अभाव भएको नगर उपप्रमुख जानकी बमले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “वडाहरुमा सचिव नहुँदा नगरपालिकाले सम्पादन गर्ने काममा बाधा पुगेको छ ।”
दशवटै वडामा सचिवको काम प्राविधिक सहायकहरुले गर्नु परिरहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीन धानुकले बतए । वडाका अधिकांश काम नगरपालिकाबाटै हुने भएकाले नागरिकले नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । उनले भने “सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायतका कामहरु पनि नगरबाटै सम्पादन गर्ने गरिएको छ ।”
वडामा सचिव नहुँदा नागरिकलाई सास्ती हुने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । वडामा सचिव नहुँदा नगरपालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको स्थानीयवासी रामबहादुर धामीले बताए । उनले भने “गाउँमा सिंहदरबार आए पनि कर्मचारी नहुँदा साबिकका गाविसबाट पाइने सेवा पाउन पनि मुस्किल भएको छ ।”
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको अढाई वर्ष बढी भइसकेको भए पनि अझै कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारीको अभावमा वडा तहबाट पाइने सेवा प्रभावकारी नभएको नागरिकले गुनासो गरेका छन् । कर्मचारी समायोजनपश्चात् जिल्लामा कर्मचारीको अभाव बढी भएको हो । रासस
विषम मौसमी घटनाबाट चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु
१२ माघ, पेरिस । यस शताब्दीको पहिलो २० वर्षको अवधिमा…
२४ घण्टामा देशैभरी थपिए ३३९ कोरोना संक्रमित, ४०१ जना निको, १० को मृत्यु
१२ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशैभरी ३३९ जनामा…
प्रचण्ड–नेपाल समुहप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने – सिङ्ग फुक्लेका गोरु !
ओलीले पशुपतिनाथमा बालेको लाख बत्तीको संकेत के हो ?
ब्राजीलमा विमान दुर्घटना हुदाँ ४ फुटबल खेलाडीको मृत्यु